Toriteny Alahady 03 Jiona 2018 – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Ity Tenin’Andriamanitra ity dia maneho ny endriky ny Eokaristia : rehefa nivoaka ny tany Ejipta ny vahoaka Israely dia nanao ny Fanekem-pihavanana voalohany tamin’izy ireo Andriamanitra. Ny olona tsy mifankahazo no mila fampihavanana ; ka tafasaraka tamin’Andriamanitra ny olombelona satria noravan’ny olombelona tamin’ny alalan’ny fahotana ny fihavanany tamin’Andriamanitra kanefa Andriamanitra indray no nitady fihavanana tamin’ny olombelona : nalan’Andriamanitra tamin’ny fanandevozana ny zanak’Israely, nentiny tany amin’ny tany efitra sy naniraka tovolahy 12 tamin’ny fokon’Israely nametraka vato 12 ary teo no nametrahana ny Ôtely ; nentin’i Moïzy sy novakiany ny lalàna ka hoy ny vahoaka « Ho ekenay sy hotanterahinay avokoa izay rehetra nolazain’Iaveh ». Tahaka izany koa ny amin’ny Litorjia, rehefa vita ny famakiana ny Tenin’Andriamanitra sy ny Toriteny dia manao ny Fiekem-pinoana isika. Izany hoe : ny fizotran’ny Sorona Masina ataontsika dia manaraka izay voalaza ao amin’ny Baiboly : Vakiana ny lalàna (Tenin’Andriamanitra) dia hazavaina, avy eo manao fiekem-pinoana, izay vao manao ny sorona (omby nalatsa-drà) na ny Eokaristia. Tsy misaraka ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra sy ny fankalazana ny Eokaristia. Ka ny atao hoe mamonjy Sorona Masina dia tsy maintsy hatramin’ny fanombohana ka hatramin’ny famaranana.
Ny Evanjely dia mitantara ny fanomanana ny Paka sy ny sakafo farany niarahan’i Jesoa tamin’ny mpianany. Nirahiny ny mpianany roa lahy hanomana ny trano hankalazana ny Paka. Tamin’ny sakafo dia hoy izy tamin’ny mpianany : « Raiso fa vatako ity … Raiso fa rako ity, rà hiorenan’ny fanekem-pihavanana vaovao izay alatsaka ho an’ny maro » Io no sorona faratampony sy lavorary indrindra. Hoy ny ohabolan-drazantsika hoe « Izay iray vatsy, iray aina » koa izay mandray ny Vatana aman-dràn’i Kristy koa izany dia iray aina. Rehefa mandray Komonio, noho izany, dia tokony ho vonona hamela heloka satria sakafom-pihavanana sy sakafo mampiray ny Eokaristia.
Aoka ary ho tsapantsika ny lanjan’izany fihavanana izay mba hampifandray antsika ary aoka ho tsara fiomanana isika rehefa handray ny Eokaristia mba hisy vokany soa eo amintsika izay fandraisana ny Eokaristia izay.